Transportgbọ njem na Derince Research Hospital | RayHaber
HomeỤzọ Awara AwaraAkụkọ AsphaltỤgbọ njem na Ụlọ Ọgwụ Deryl Research
13 / 06 / 2018 Akụkọ Asphalt, General, Ụzọ Awara Awara, Turkey
Ngalaba Transportgbọ njem Kocaeli na-emegharị okporo ụzọ ndị mebiri emebi n'ihi akụrụngwa niile dị n'obodo ahụ. Ndị otu egwuregwu Derince na-arụ ọrụ na Traininglọ Ọzụzụ na Nnyocha, nke bụ ụzọ dị mkpa na njem nke asphalt ngwa Çavdar Street. N'ime ọrụ ahụ, a na-emezigharị okporo ụzọ kpamkpam.
AVDAR STREET RENEWAL
Onye isi odeakwụkwọ ukwu nke Kocaeli Metropolitan Ilhan Bayram, nyochara okporo ụzọ a rụrụ na Çavdar Street nyochara. Secretary General Bayram “streetzọ a bụ otu n'ime ụzọ dị mkpa maka Derince. Citizensmụ amaala anyị na-esite na ntụziaka D-100 na-eji ụzọ a eruo Hospitallọ Ọgwụ nyocha nke Derince. Anyị na-arụzigharị okporo Çavdar a maka njem ga-adaba adaba. Anyị wuru ihe owuwu ụzọ. Ugbu a, anyị na-eme ka okporo ụzọ anyị nile bụrụ ihe dị ka apịtị na ọrụ paịlị. ”
2 TAA 200 TONE ASPHALT
A wụsara Asphalt n'okporo ụzọ mita 650 mbụ. Puku puku 200 nke asphalt dị ọkụ ka atọrọ. Ọrụ na-aga n'ihu n'okporo ụzọ nke abụọ nke mita 500. Otu puku tọn asphalt ga-atọgbọrọ n'okporo ụzọ a. A ga-arụzigharị n'akụkụ ụzọ abụọ ahụ. Mgbe ahụ, a ga-awụpụ otu puku tọn ihe atụ nke 300 nke ụzọ ahụ dum. N’ebe a ga-eme ka ọ dị ọhụrụ n’okporo ụzọ, a ga-emepụta mkpokọta 2 puku 500 mita na 2 puku square mita.
Nnyocha nke thyssenkrupp na Rottweil Test Tower…
National Rail Systems National Rail Systems…
CHP, 3. Nnyocha na ọdụ ụgbọ elu…
Ntupụta pụrụ iche maka Izmir New Buses Tinye Service